Thenga kwaye uthengise amakhadi ezipho kwi-Intanethi! | Martech Zone
Thenga kwaye uthengise amakhadi ezipho kwi-Intanethi!
NgoLwesibini, nge-26 kaDisemba ngo-2006 NgoLwesibini, nge-26 kaDisemba ngo-2006 Douglas Karr
Kanye ngexesha leeholide. Ngaba uyazi ukuba i-10% yawo onke amakhadi ezipho awaze ahlangulwe? Leyo yimali yasimahla kubathengisi.
Ngaba unayo ikhadi lesipho ongasokuze ulisebenzise? Yithengise Ukutshintsha!
Ngaphambi kokuba uye kuthenga bonke abahlobo bakho, usapho, kunye nabantu osebenza nabo Amakhadi eSipho, kufuneka ubathenge Ukutshintsha… Ngesaphulelo!
Heck, ngesaphulelo esiphakathi esiyi-12% xa usithenga, kutheni ungathengi amakhadi ezipho kwi-Intanethi kwaye wenze nje ukuthenga kwakho rhoqo?
Ndijonge namhlanje kwaye ndingathenga iKhadi le-Starbucks leedola ezingama-40 nge $ 35 !!! Nantso iMocha yasimahla!
Qaphela: iSwapagift.com iqinisekisa ibhalansi kwikhadi lesipho ngaphambi kokuba kwenziwe iintlawulo. Enjani yona ingcamango!
2007 Nceda uzise abaHleli abatsha
Imixholo ephezulu yeAdsense: I-Ajax, iFlash, iWordPress kunye neFirefox
Ngomhla wama-26 ku-Disemba 2006 ngo-2: 16 PM
Ndifumene enye, nayo:
Mar 10, 2007 ngo 5:42 PM
Ukhetho lweSwapagift.com lubalasele. Ndithenge amakhadi aliqela, kwaye bahlala benonyuselo kunye nentengiso. Ndithengile amakhadi emfihlo e-victoria anje nge-20% yesaphulelo kwaye akukho ntlawulo yokuhambisa.